Faah Faahin: Qarax ismiidaamin ah oo lagu weeraray Xero Ciidan ku taal Muqdisho - Jowhar Somali news Leader
Home News Faah Faahin: Qarax ismiidaamin ah oo lagu weeraray Xero Ciidan ku taal...
Faah Faahin: Qarax ismiidaamin ah oo lagu weeraray Xero Ciidan ku taal Muqdisho
Gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay ayaa lagu weeraray xero ay degan yihiin Ciidanka xoogga dalka oo ku taal dhabarka dambe Garoonka kubadda cagta ee Stadium Muqdisho ee degmada Warta Nabadda Ex Wardhiigley.
Wararka ayaa sheegaya in gaari nuuca loo yaqaano Noha oo waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay uu isku qarxiyay xerada ciidanka, Guutada 12-ka April.
Khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay qaraxa, iyadoo weli la heyn tiro rasmi ah, hase ahaatee qaar ka mid ah warbaahinta maxalliga ayaa sheegaya in ugu yaraan lix askari ku dhinteen, tiro intaa ka badan ku dhaawacmeen.
Wararka ayaa intaa ku daraya in khasaaraha ka dhashay qaraxa uu aad u badan yahay, isla markaana gaariga qarxay uu gudaha u galay xerada.
Madaxweyne Farmaajo iyo Madaxda Dowlad goboleedyada oo is faham ka gaaray dhismaha 3 Guddi
Ciidanka Kumaandooska oo howlgal gaar ah eegaano ka tirsan J/Hoose
Al-Shabaab oo xalay weeraray mid ka mid ah Koontaroolada Afgooye